Chili Piper: Usoro Mbugharị Na-akpaghị aka maka Inbound Lead Conversion | Martech Zone
Chili Piper: Usoro Mbugharị Na-akpaghị aka maka Ntugharị Mbata Inbound
Tuesday, July 21, 2020 Tọzdee, Ọktoba 1, 2020 Jason Oakley
Ana m anwa inye gị ego m - gịnị kpatara ị ji eme ya siri ike?
Nke a bụ mmetụta a na-ahụkarị n'ọtụtụ ndị na-azụ B2B. Ọ bụ 2020 - gịnị kpatara anyị ji emebi oge ndị na - azụ ahịa anyị (yana nke anyị) yana ọtụtụ usoro mgbe ochie?
Nzukọ kwesịrị iji sekọnd ole akwụkwọ, ọ bụghị ụbọchị.
Ihe kwesịrị ịbụ maka mkparịta ụka bara uru, ọ bụghị isi ọwụwa.
Ekwesiri iza ozi email na nkeji, anughi n’ime igbe nnabata gi.
Mkparịta ụka ọ bụla na njem ndị na-azụ ahịa kwesịrị ịbụ nke na-enweghị isi.
Ma ha abụghị.
Chili Piper dị na ebumnuche iji zụta (na ire) ọtụtụ ihe na-egbu mgbu. Anyị na-ele anya na-emegharị usoro nke ndị otu na - enweta ego na - eji rụọ ọrụ na ihe niile ị kpọrọ asị gbasara nzukọ, ihe omume, na email - ka ị nwee ike iwepụtakwu oge iji mee ihe.
Ihe si na ya pụta bụ arụpụtakwu ihe, ọnụego ntụgharị dị elu, na azụmahịa ndị ọzọ emechiri.
Anyị nwere usoro ngwaahịa atọ ugbu a:
Ihe omume Chili
Chili Igbe mbata
Nzukọ Chili na-enye ụlọ ọrụ kachasị ngwa ngwa, nke zuru oke maka ịhazi usoro na ịhazi usoro ọ bụla na usoro ndụ ndị ahịa.
Ihe atụ 1: chedhazi oge iji hazie usoro
nsogbu: Mgbe olile anya na-arịọ ngosi na webụsaịtị gị ha adịlarị 60% site na usoro ịzụrụ ma dị njikere ịnwe mkparịta ụka ịmara. Mana oge nzaghachi bụ oge 48. Ka ọ na-erule oge a, atụmanya gị abanyela na onye na-asọmpi gị ma ọ bụ chefuo nsogbu ha kpamkpam. Ọ bụ ya mere na 60% nke inbound nzukọ arịrịọ anaghị enweta akwụkwọ.
ngwọta: Concierge - ihe nhazi usoro ihe eji abanye n'ime Nzukọ Chili. Concierge bụ onye nhazi ntanetị n'ịntanetị nke na-ejikọ ọnụ na ụdị web gị dị mfe. Ozugbo etinyere mpempe akwụkwọ ahụ, Concierge tozuru ndu ahụ, mee ya ka ọ bụrụ onye na-ere ahịa ziri ezi, ma gosipụta usoro nhazi nke onwe gị maka atụmanya ị ga-ede oge - ihe niile n'ime nkeji.
Ihe atụ 2: Usoro ihe omume onwe onye site na email
nsogbu: Tọ oge nzukọ na email bụ usoro na-akụda mmụọ, na-ewe ọtụtụ ozi ịntanetị na-aga iji kwado oge. Gbakwunye ọtụtụ ndị na akụkụ na-eme ka ọ bụrụ ihe na-agaghị ekwe omume. Kachasị mma, ọ na-ewe ụbọchị iji depụta oge. Nke kachasị njọ, onye na-akpọ gị ga-ada mbà ma nzukọ ahụ anaghị eme.
ngwọta: Akwụkwọ ozugbo - ọtụtụ nzukọ mmadụ, nke email zitere n'otu pịa. Akwụkwọ ozugbo bụ ndọtị usoro ịntanetị (dị na G Suite na Outlook) nke ndi ozo na-eji ede akwukwo nzuko ngwa ngwa karia email. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịhazi nzukọ, were oge ole na ole enwere ọmụmụ ihe wee tinye ha na ozi email n’aka otu onye ma ọ bụ ọtụtụ mmadụ. Onye nnata ọ bụla nwere ike pịa otu n'ime oge a tụrụ aro ka onye ọ bụla nweta akwụkwọ. Pịa otu aka na nke ahụ.
Ihe atụ nke atọ: Shazi ndokwa inyeaka na-enye aka
nsogbu: Hazi oge inye aka (aka. Handover), iru eru, wdg) nzukọ bụ usoro nlọghachi na azụ. Typicaldị inye aka dị n'etiti SDR na AE (ma ọ bụ AE ka CSM) bụ nzukọ edetu. Mana iwu nkesa ụzọ na-eme ka ọ bụrụ ihe ịma aka maka ịmegharị akwụkwọ na nzukọ akwụkwọ ngwa ngwa ma chọọ akwụkwọ ntanetị. Nke a na - akpata igbu oge na enweghị ngosipụta, mana ọ na - agbakwunye ihe egwu nke ikesa ụzọ adịghị mma, nsogbu arụmọrụ, na mmụọ adịghị mma.
ngwọta: Akwụkwọ ozugbo - nzukọ ọmụmụ nzukọ akwụkwọ na ebe ọ bụla na sekọnd. Mgbakwunye anyị 'Akwụkwọ ngwa ngwa' gbakwunyere na Salesforce, Gmail, Outlook, Salesloft, na ndị ọzọ, yabụ ndị na-emegharị ihe nwere ike itinye nzukọ na ebe ọ bụla na sekọnd. A na-ebuga ndị nwe ya na-eduga na-akpaghị aka ka ndị na-emegharị ihe nwee ike ide nzukọ nzukọ na kalenda kwesịrị ekwesị, oge ọ bụla, na-enweghị ịchọ site na mpempe akwụkwọ.
Rịọ Chili Piper Demo
Site na Ihe omume Chili, ọ dị mfe maka ndị na-ere ahịa ihe omume iji hụ na edekọ akwụkwọ nzukọ na-aga n'ihu maka ahịa ahịa, nkọwa ziri ezi na akpaghị aka nke ohere emere na mmemme ndị ahụ, yana njikwa enweghị usoro nke usoro mgbanwe ikpeazụ na nke abụọ ohere na nnweta ụlọ.
Ihe atụ 1: -debanye Akwụkwọ Nzukọ Ihe Omume
nsogbu: Na-eduga na otu ihe omume, ọtụtụ ndị na-ere ahịa ahịa kwesịrị iji aka hazie nzukọ ha. Nke a pụtara ozi ịntanetị na-abịanụ na atụmanya na-anwa ịhazi kalenda na ụlọ nzukọ. N'ozuzu, nke a na-emepụta ụda isi ọwụwa na mgbagwoju anya maka onye nnọchiteanya, onye ahịa, na onye njikwa ihe omume - onye ọkpụkpọ dị mkpa nke kwesịrị ijikwa ikike ime nzukọ ma mara ihe nzukọ na-eme, mgbe. A na-ejikwa usoro a dum na-agbasa ihe.
ngwọta: Na Ihe omume Chili, nzaghachi ọ bụla nwere njikọ ntinye akwụkwọ pụrụ iche ha nwere ike ịkekọrịta na atụmanya tupu ihe omume ahụ - na-eme usoro ihe omume na nhazi ụlọ otu usoro. A na-agbakwunye nzukọ ndị edere na Kalinda Check-In - kalịnda etiti nke ndị njikwa ihe omume na-eji soro nzukọ ọ bụla na-eme na ala ihe omume.
Ihe atụ 2: Nzukọ Nzukọ Nzukọ na ROI
nsogbu: Ndị na - eme emume (yana ndị na - eme Mmemme) na - agbaso nzukọ nzukọ na Salesforce ma gosipụta ihe omume ROI. Ckingchọpụta nzukọ ọ bụla na ogbako bụ usoro ntuziaka maka ndị njikwa ihe omume. Ha kwesiri ichu ala ndi na-ere ahia, na-achikota otutu kalenda, na ichota ihe nile di n’ime akwukwo. Enwekwara usoro ntuziaka nke ịgbakwunye nzukọ ọ bụla na mkpọsa ihe omume na Salesforce nke na-ewe oge. Mana ọ dị mkpa iji gosipụta ROI.
ngwọta: Ihe omume Chili na-ejikọ ọnụ na Salesforce, yabụ a na-enyocha nzukọ ọ bụla edepụtara na-akpaghị aka n'okpuru mkpọsa ihe omume ahụ. Ndenye Kaadị anyị na-eme ka ọ dị mfe maka ndị njikwa ihe omume soro na-enweghị ihe ngosi na melite ọmụmụ nzukọ na Salesforce. Nke a na - eme ka ọ dịkwuo mfe ịkọ akụkọ banyere ROI ma tinye uche ha na ịme nnukwu mmemme.
Chili Igbe mbata (nke dị ugbu a na beta)
Maka otu ndị na-enweta ego na-eji email iji kpọtụrụ ndị ahịa na atụmanya, Chili Piper Inbox na-enye ụzọ dị mfe, nke ọma, na nke jikọtara ọnụ maka ndị otu na-arụkọ ọrụ ọnụ site na ịmekọrịta karịa, inwe visibiliti na data ndị ahịa, na ịnye ahụmịhe ndị ahịa enweghị esemokwu.
Kpụrụ nke 1: Imekọrịta ụlọ na ozi ịntanetị
nsogbu: Ime email dị n'ime ya dị egwu, na-agbagwoju anya, ma sie ike ijikwa. Ozi ịntanetị ga-efu, ị ghaghị ịkọcha narị narị CCs / Forwards, ị ga-ejikwa ya kwurịta ya na-anọghị n'ịntanetị ma ọ bụ na nkata ebe ọ nweghị ihe dị n'ime ya ma ọ nweghị ihe ederede.
ngwọta: Igbe mbata - atụmatụ email na-emekọrịta ihe n'ime Igbe mbata Chili. Yiri otu ị si arụkọ ọrụ na Google Docs, njirimara Inbox Comments anyị na-enye gị ohere ịkọwapụta ederede ma bido mkparịta ụka gị na ndị otu gị ozugbo n'ime igbe mbata gị. Nke a na - eme ka ọ dị mfe ịmịnye ndị otu egwuregwu maka nzaghachi, enyemaka, nnabata, ịnye ọzụzụ na ndị ọzọ.
Ihe atụ 2: inschọ ihe ọmụma akaụntụ
nsogbu: Knowmara n'ezie ihe mere na akaụntụ tupu ị ketara eketa ọ na-ewe ọtụtụ awa nke ọrụ na-agwụ ike na-achọ site na ọrụ Salesforce, na-enyocha ọrụ na ngwa ahịa ahịa, ma ọ bụ na-esi na CCs / Forward na igbe mbata gị.
ngwọta: Akaụntụ Intelligence - ozi ọgụgụ isi nke email n'ime Igbe mbata Chili. Site na Igbe mbata Chili, ị nwere ike ịnweta akụkọ ntolite email na otu akaụntụ ọ bụla. Anyị Akaụntụ Intelligence atụmatụ na-ahapụ gị ngwa ngwa iji nweta ọ bụla email mgbanwe na otu akaụntụ, niile si n'ime igbe mbata gị. Nke a na - eme ka ọ dị mfe ịbịaru ozi ịntanetị ọ bụla na gburugburu ịchọrọ.
Banyere Chili Piper
Tọrọ ntọala na 2016, Chili Piper nọ na ozi iji mee nzukọ na email karịa akpaghị aka na mmekorita maka azụmaahịa.
Chili Piper na-elekwasị anya na akpaghị aka na usoro oge ochie na usoro ihe omume na email na-akpata esemokwu na enweghị isi na usoro ahịa - na-eme ka arụpụtawanye ụba na ọnụego ntụgharị n'ogologo.
N'adịghị ka usoro ọdịnala nke njikwa ụzọ inbound, Chili Piper na-eji iwu amamihe iji tozuo na kesaa ndị na-eduga na ntugharị ziri ezi n'oge. Sọftụwia ha na - enyekwa ụlọ ọrụ ohere itinye aka na SDR gaa AE na nzukọ akwụkwọ site na mkpọsa ahịa na ihe omume dị ndụ. Site na saịtị ha na-esote na email, Chili Piper kwupụtara na Chili Inbox na nso nso a, igbe mbata maka otu ndị na-enweta ego.
Lọ ọrụ dịka Square, Twilio, QuickBooks Intuit, Spotify, na Forrester jiri Chili Piper mepụta ahụmịhe dị ịtụnanya maka ndu ha, na nloghachi, gbanwee okpukpu abụọ nke ndu na nzukọ a na-enwe.
Tags: nzukọ akwụkwọihe omume chiliigbe chilinzukọ chiliose chiliakpaaka emailG Suitegsuiteusoro inbound ụzọinbound usoro ihe omumendu akanzute nzute
Jason Oakley Tuesday, July 21, 2020 Thursday, October 1, 2020
Jason Oakley bụ Director nke Ahịa Ahịa na Chili Piper. Jason bu onye ahia ahia ahia nwere mmasi na agu nke ahia, SaaS, oru itumgbere ahia na ihe omuma nke ndi ahia. N'ime afọ 10 nke na-arụ ọrụ na obere obere mbido, Jason enweela ohere igosipụta ọganiihu n'ọtụtụ ọrụ ahịa na azụmaahịa, na-enyere ya aka ịre ahịa ngwaahịa maara ihe nke na-achọ ịghọta njem ndị ahịa niile.
Ihe Nlereanya 5 nke Mpụpụ Ebumnuche ga-eme ka ọnụego mgbanwe gị dị mma
Ogwurugwu: Nakọta, Gbanwee, na Nri ahia